Sida loo Beddelaan VOB in MKV
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan VOB in MKV ee Mac iyo Win (Windows 8 ka mid ah)
Sababtan awgeed qaar ka mid ah, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si loogu badalo VOB in MKV. Maqaalkani waxa uu la wadaagi doonaa VOB sahlan in la isticmaalo si Converter MKV inuu kaa caawiyo inaad badalo VOB, iyo wax kasta oo kale oo files DVD warbaahinta in MKV files la video tayo sare leh. Taasi Video Converter ( Video Converter u Mac ), ku dhawaad ​​diinta qaab kasta in qaab kasta oo aan video tayada wax laga badiyay.
Hagaha soo socda waa ku saleysan madal Windows. Dadka isticmaala Mac, waxaad riixi kartaa halkan: Guide users Mac ' .
Tallaabo 1: Ku dar files VOB in VOB in ay Converter MKV
Guji ka button xitaa your computer disk adag, iyo dooran files bartilmaameedka inay dajiyaan. Ama haddii files VOB yihiin ee anfacaya, si toos ah kuwaa oo in barnaamijkan.
Talaabada 2: Dooro MKV sida qaab wax soo saarka
Hit qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, ka dibna dooro "MKV" in "Qaabka" ayuu> "Video" category liiska dhisayaa-up qaabka.
Fiiro Gaar ah: Tani Converter Video sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto subtitles in VOB files. Just tagaan si ay interface tafatirka ay shaqada u qabto. Si aad u heshid talooyin dheeraad ah oo ku tafatirka, sida beerista, falinjeeerka, isagoo intaa ku daray saamaynta iyo watermark iwm, waxaad tagi kartaa: ayeey Guide
Tallaabo 3: U beddelaan VOB in MKV
Guji "Beddelaan" si loogu badalo VOB in MKV. Waxaad arki doonaa app this jeestay videos ka format VOB in qaab MKV, la soo bandhigay bar horumarka. Marka ay gaadho 100%, kaliya ku dhufatey "Open Folder" badhanka hoose si aad u ogaato faylasha wax soo saarka ee folder wax soo saarka ah.
Badan oo ku saabsan VOB iyo MKV Baro:
VOB - sida "Video UJEEDDO". Waa qaab weel multimedia ah, kaydinta video on DVD disc ah. Waxaa ku jiri kara waxyaabaha digital kala duwan sida video, audio, Cinwaan, menu iwm, kuwaas oo wada multiplex qaab durdur. Waxaa si dhab ah oo ku salaysan MPEG-2, laakiin la dhaafi karin dheeraad ah iyo caddaymaha.
MKV - Waa qaab xor ah oo furan weel il, ee ay soo Matroska. Oo waxaa qaban karaa noocyo kala duwan oo tiro aan xad lahayn of audio, video, sawirka ama kuwan raadkaygay Cinwaan in mid ka mid ah faylka. Waxa uu si weyn u isticmaala in ay ku kaydiso content multimedia caadiga ah sida filimada ama ay muujinayso TV iwm noocyada file Matroska waa .MKV u video (la subtitles iyo audio), .MKA u maqal ah oo kaliya files, .MK3D u stereoscopic video, iyo .MKS u subtitles kaliya.
Sida loo Download New York Times Video la One Click
Video Editor For Windows 8: Edit iyo shakhsiyeeyo Videos